ई-रातो खबर २०७७, २१ जेठ बुधबार ११:१८ October 9, 2020 2290 Views
महान् जनयुद्घ प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताविरुद्घ क्रान्तिकारी सङ्घर्षको ज्वारभाटा थियो । हजारौँ युवाहरू क्रान्तिमा मानवजगत्को सुन्दर भविष्य खोज्न लामबद्ध थिए । क्रान्तिकारी लक्ष्य, उद्देश्य र सामूहिक सपनासहित क्रान्तिकारी धाराको नयाँ मोर्चामा सामेल थिए । राजतन्त्रात्मक सामन्तवादी पहाड र त्यसबाट उत्पन्न साम्राज्यवादी पहाडलाई पन्छाएर नयाँ जनवादी व्यवस्था हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने जनयुद्घको लक्ष्य र उद्देश्य थियो । जीवन र जगत्लाई बुझ्ने आआफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ । हरेक जीवित वस्तुले आफ्ना लागि बाँच्न जानेका हुन्छन् र आफ्नो अस्तित्वका लागि बाँच्ने आमचरित्र नै हो । यो चरित्रभन्दा माथि उठेर समाज र राष्ट्रका लागि परिस्थितिसँगै सङ्घर्ष गर्न महान् योद्घाहरू जन्मने गर्दछन् । अरूका लागि बाँच्ने र मर्ने योद्घाहरू जन्माउने राम्रो अवसर जनयुद्घले पैदा ग¥यो । हाम्रा सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग योद्घाहरू तिनै थिए जसले आफ्नो तुच्छ स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर अघि बढे । आफ्ना लागि जीवन रोज्ने कि राष्ट्र र जनताका लागि जीवन बेपत्ता बनाउने भन्नेमा पछिल्लो बाटो रोजे । योभन्दा महानता अरू केही हुन सक्दैन । धर्तीमा रहेका हामीले उनीहरूको सपना, लक्ष्य, उद्देश्यलाई हरदम केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । सामन्तवादी र साम्राज्यवादी दुई पहाड पन्छाएर जनताको जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउने हाम्रा सहिद, बेपत्ता योद्घाको सपना अहिले पनि अधुरै छ । राजतन्त्र त ढल्यो तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको दलाल संसदीय व्यवस्थाले त्यसको स्थान लियो । जुन वर्गविरुद्घ लड्दा हाम्रा योद्घाहरू बेपत्ता भए तिनै वर्गसँग घाँटी जोड्ने काम जनयुद्घको मुख्य नेतृत्वले ग¥यो । जितेर पनि हारेको जस्तो, भएर पनि नभएको जस्तो स्थितिमा जनयुद्घलाई नेतृत्वले पु¥याए । यो नेपालको आजको तीतो यथार्थ हो जुन हामीले भोगिरहेका छौँ । तसर्थ हाम्रा बेपत्ता योद्घाका अधुरा सपना पूरा गर्ने गरी उनीहरूले उठाएका मुद्दालाई जोड्नुपर्छ । बेपत्ता योद्घालाई परिवारको सीमित घेरामा होइन, समाज र राष्ट्रको फराकिलो दायरामा स्थापित गरी बाँकी रहेको काम पूरा गर्न दृढ बन्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको उच्च सम्मान भनेकै उनीहरूले उठाएको अभिभारालाई सचेततापूर्वक पूरा गर्नु हो ।
बेपत्ता योद्घाका परिवारको आँसु सँगाल्न मिल्ने भए सायद ठूलै नदी बन्थ्यो होला । अहिले पनि परिवारका आँखाहरू ओभाएका छैनन् । पर्खाइका पीडा र छट्पटीले दिनहरू बितिरहेका छन् । चाडपर्व, दुःखसुखका हरघडीमा बेपत्ता योद्धाहरूलाई तिनका आफन्तले खोजिरहेका हुन्छन् । न लास छ, न सास छ । न छैन भनी ढुक्क हुनु, न त छ भनेर देख्न पाउनु ! योभन्दा ठूलो पीडा परिवारलाई के हुनसक्छ ? अरूको भोगाइलाई महसुस गर्नु र आफैँले भोग्नुमा धेरै फरक हुँदो रहेछ । जल्दा कस्तो हुन्छ जल्नेलाई थाहा हुन्छ, हेर्नेलाई होइन । परिवारलाई यही पीडा भैरहेको छ । छोराछोरी फर्केर आउने आशाका त्यान्द्रा बोकेर दिनहुँ मरेर बाँच्नुपर्ने अवस्था परिवारको छ । राज्य यो विषयमा बोल्न चाहँदैन । जनयुद्घका पहलकर्ता नेतृत्व र जनयुद्घ सिध्याउन, बेपत्ता बनाउन निर्देशन दिनेहरू एकै ठाउँमा बसेर सत्ताको बागडोर पालैपालो समालिरहेका छन् तर बेपत्ता खोजीको मुद्दा पूरै ओझेलमा छ । राज्य यसमा उदासीन छ । चासो दिँदैन र योजनाबद्घ बोल्न चाँहदैन । यो स्थितिमा परिवारको मनभित्र निराशा, कुण्ठा र आक्रोश उत्पन्न भएको छ ।
पार्टी नेतृत्वमा देखिएको विचलनसँगै जब माओवादीमा विभाजन देखापर्यो परिवारलाई यसले नराम्रोसँग असर पा¥यो । भेटघाटका क्रममा विभाजनको असर, निराशा र आक्रोश व्यापक नै देखिन्थ्यो । कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सबै कुराको निर्धारण गर्छ । क्रान्तिकारी विचार, सिद्घान्तबिनाको एकता भुसको थैलोजस्तो हो । यसमा क्रान्तिकारी आत्मा हुँदैन भन्ने व्यावहारिक जीवनमा बुझ्न र पचाउन परिवारलाई गाह्रो हुने नै भयो । सहिद, बेपत्ता, घाइते, जनसेना, सत्ता, जनयुद्घलाई जब नेतृत्वले मात्र बार्गेनिङको साधन बनाएर एमालेसँग समाहित भएपछि भने क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनु सही रहेछ भन्ने राम्रोसँग परेको छ । आत्मसमर्पण, विचलन र पलायनको बाटोबाट सहिद तथा बेपत्ता योद्घाको सपना पूरा हुँदैन भन्नेमा धेरैजसो परिवारको एकमत देखिन्छ । सहिद, बेपत्ता योद्घाको स्मृति कार्यक्रमसमेत खुलेर गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारी नेकपा पुगेको छ । त्याग, समर्पण र बलिदानको मूल्य–मान्यतालाई आफ्नै पार्टीभित्र अप्ठ्यारो पर्दा बार्गेनिङ गर्ने नत्र ओझेलमा पार्ने मात्र होइन, रछ्यानमा मिल्काउने पार्टी नेतृत्व देख्दा परिवारलाई समाजमा शिर ठाडो पारेर हिँड्ने अवस्था छैन । भोक, रोग, गरिबी र बेरोजगारीको जटिल समस्या र अभाव त छँदैछ, त्यसैमा बलिदानको अपमान र अवमूल्यनले थप पीडा र छट्पटी पैदा भएको छ । अप्ठ्यारोमा बोलिदिने, बेपत्ता योद्घा खोज्न सधैँ साथ दिने र अधुरा क्रान्तिका कार्यभार पूरा गर्ने पार्टी आवश्यक छ । जे गर्छ पार्टीले गर्छ भन्ने आमबुझाइ परिवारमा हुँदै गएको छ । तसर्थ टुटेका र फुटेका भावना र मनोविज्ञानलाई विचार, सङ्गठन र सङ्घर्षको मालामा जोड्न सबैले मेहनत गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
सङ्कटकालको अप्ठ्यारो अवस्थामा बेपत्ता योद्घा खोजी अभियानमा परिवारको अतुलनीय योगदान रह्यो । माओवादीको म पनि उच्चारण गर्न नपाइने, नेता–कार्यकर्ताको टाउकाको मूल्य राज्यले तोकेको स्थिति, पार्टीका नेता–कार्यकर्ता सबै भूमिगत हुनुपर्ने अवस्थामा बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गर्न परिवारले आँट गर्नु त्यति बेला सामान्य विषय छँदै थिएन । विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाबाट शान्ता भण्डारी, कृष्णा राई, मनोरमा नकर्मी, इन्द्रकेशरी श्रेष्ठ, कृष्णाबेटी प्रजापति, मोहनमाया माली, उदय राई, उमा राई, पोखराबाट मोतीमाया पौडेल, झापाका भीमबहादुर बस्नेत, चन्द्रकुमारी बस्नेत, चितवनकी शर्मिला त्रिपाठी, धादिङका टीका कँडेल, काभ्रेकी सावित्री घिमिरे लगायत (कतिपयको नाम छुटेको छ– लेखक) ले आफन्त खोज्ने कार्यमा कुनै कसर बाँकी राख्नुभएन । उमेर अवस्थाले घरमा आराम गर्नुपर्ने बेलामा राज्यको चरम दमनको स्थितिमा रातदिन नभनी प्रहरीको लाठी, बुट खाँदै ज्यानको परबाह नगरी धर्ना, जुलुस, अनशन, घेराउलगायत विविध दुःखकष्ट उठाउनुभयो । वृद्घ बुबाआमाले गरेको यो ऐतिहासिक सङ्घर्ष क्रान्तिकारी आन्दोलनको इतिहासमा भाबी पुस्तालाई प्रेरणा दिने गरी स्थापित गराउन जरुरी छ ।
शान्तिप्रक्रियासँगै परिवार समाजले चौतर्फी सङ्घर्षको ढोका खोल्यो । सडक, सदन र सङ्घर्षका मोर्चा एकसाथ अघि बढायो । वैचारिक तथा मानव शक्ति राम्रैसँग केन्द्रित गर्यो । परिवारमा आफन्तहरु सार्वजनिक हुनेमा नयाँ आशा पलायो तर यो आशा धेरै वर्ष टिकेन । नेतृत्वमा देखिएको वैचारिक स्खलनसँगै क्रमशः सङ्घर्षको मोर्चा फितलो बन्दै गयो । जीवनलाई जोखिममा राखेर सङ्कटको बेलामा पनि एकजुट भएर बढेको सङ्घर्ष शान्तिप्रक्रियाको केही वर्षको तामझामसँगै निराशा र उदासीनतामा परिणत हुँदै गयो । अप्ठ्यारोमा गरिएको सङ्घर्ष सजिलो अवस्थामा झन् तुहिँदै जाने स्थिति बन्यो । यो सबै पार्टी नेतृत्वमा देखापरेको विचलन र आत्मसमर्पणका कारण भएको थियो । क्रान्तिकारी आन्दोलनमा देखापरेको कालो बादललाई चिर्दै क्रान्तकारी पार्टी निर्माणसँगै फेरि आशाका किरणहरू देखापर्दै गएका छन् । यो आन्दोलनलाई धर्मर हुन दिनु हुँदैन । बेपत्ता योद्घा खोजी अभियानलाई नयाँ गति, उच्च एकता र मनोबलका साथ अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।
परिवार र समाजको पहिलो महत्वपूर्ण माग भनेकै राज्यले बेपत्ता योद्घाको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हो । कि लास कि सास, कि चिहान कि ज्यान देखाऊ भन्ने प्रमुख माग हो । आफन्तका बारेमा जान्न पाउनु परिवारको नैसर्गिक अधिकार हो । दोस्रो माग अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने हो । कुन सरकारको पालामा कति मानिस बेपत्ता भए, विवरणसहित पटकपटक राज्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । यो मुद्दा सुनुवाइ हुनु त कता हो कता, अपराधीहरूलाई बढुवा गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने काम राज्यले गरेको छ । तेस्रो माग भनेको जनयुद्घका सम्पूर्ण सहिदहरूलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने, बेपत्ता योद्घाको राज्यबाट नै सम्मान गर्ने हो । जसको बलिदान र त्यागले राज्य यो अवस्थामा आएको छ, त्यही मूल्यमान्यतालाई पन्छाएर राज्य अघि बढ्नु भनेको सहिद, बेपत्ता, घाइने, अपाङ्ग योद्घाहरूको घोर अपमान र अवमूल्यन गर्नु हो । व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेकाहरूको समेत मरेपछि तिनका नाममा पार्क, स्मारक, विद्यालय, बाटो आदि बनाएर तिनलाई सम्झने कार्य गरिन्छ भने सहिद बेपत्ता योद्घाहरूलाई स्थापित र सम्मान गर्न राज्य उदासीन हुनु भनेको सहिद र बेपत्ता योद्धाप्रतिको अपमान हो । खोलो तर्यो लौरो बिस्र्यो भनेजस्तै भैरहेको छ, परिवारका लागि यो एकदम दुःखको कुरो हो । सहिद, बेपत्ता योद्घाको परिवार हुनुमा गर्व हुनुपर्नेमा सामाजिक तिरस्कार र बहिष्करणमा परेको अनुभूति परिवारले गरिरहेका छन् । योभन्दा विडम्बना अरू के हुनसक्छ ? चौथो माग परिवारको अभिभावकत्व राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने हो । राज्यले पटकपटक गरी दिएको १० लाख पनि कतिपय परिवारले अझै पाएका छैनन् । बलिदानको मूल्यलाई १० लाखमा सीमित राख्न खोज्ने सोचाइ नै गलत छ । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको समस्या त छँदैछ सामाजिक अवहेलना र अपमान पनि छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक अप्ठ्यारोमा अभिभावक बन्ने कुरामा राज्यको ध्यान गएको छैन । सहिद, बेपत्ता नागरिकका परिवारले सामान्य परिचयपत्र पनि राज्यबाट प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । औपचारिकतामा झारा टार्नेबाहेक राज्यले अरू काम गरेको देखिँदैन ।
२०५२ साल माघ २२ गते माओवादी पार्टीले संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा प्रम शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे मागपत्र बुझायो । त्यसैको १६ नं. बुँदामा २०४६ सालको जनआन्दोलनमा बेपत्ता बनाइएका भुवन थापा, दिलीप चौधरी र प्रभाकर सुवेदीको यथार्थ छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर भनियो । लगत्तै जनयुद्घ सुरु भयो । राज्यले शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, किसान, मजदुर केही भनेन । हजारौँलाई सहिद र बेपत्ता बनायो । जनयुद्घको उद्देश्य पूरा नहुँदै शान्तिप्रक्रियाको सुरुआत गरियो । अहिले नेपालको राजनीति फेरिएको छ । जनयुद्घको नेतृत्व गर्ने र सङ्कटकाल लगाएर मान्छे मार्ने, बेपत्ता बनाउनेहरू मिलीजुली राज्य सञ्चालनको एउटै सहयात्रामा छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाहेक शान्तिप्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता र पहलकर्ता भनिएकाहरू यो धर्तीमा जिउँदै छन् । सत्तास्वार्थ र अस्तित्व रक्षार्थ कहिले सँगै, कहिले फरक भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको दलाल संसदीय व्यवस्थाको डुङ्गामा सँगै सयर छन् । विगतमा २०४६ सालमा बेपत्ता बनाइएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गर्नेहरू आफ्नै नेतृत्वमा भएको जनयुद्घमा बेपत्ता हुनेहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नसक्ने स्थानमा हुँदासमेत यो मुद्दा ओझेलमा पारिरहेका छन् । बेपत्ता योद्घा सार्वजनिक नुहुनुमा अरू कसैको दोष छैन, राज्यको छ, दलाल संसदीय खेलका क्याप्टेनहरूको छ, सरकारको छ । बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गर्दा आफु पनि अप्ठ्यारोमा परिने डरले यो मुद्दालाई ओझेलमा पार्न चाहन्छन् । दरबार हत्याकाण्ड, मदन–आश्रित हत्याकाण्डजस्तै यो मुद्दालाई अनन्त नटुङ्गिने मुद्दा बनाउन चाहन्छन् । जीवनभरि यसलाइ राजनीतिक मुद्दा बनाएर आफ्नो सुरक्षित राजनीतिक भविष्यको यात्रा तयार गर्न संसदीय दलहरू लागिपरेका छन् ।
जुन वर्गका विरूद्घ जनयुद्घ छेडियो त्यही वर्गसँग आत्मसमर्पण र घाँटी जोडेर प्रचण्ड–बाबुरामहरूले जनयुद्घ अन्त्य भएको घोषणा गरे । त्याग, समर्पण र बलिदानबाट प्राप्त समानताको संस्कृतिलाई विस्थापित गरे । भ्रष्ट, दलाली र उत्पीडनको पुरातन संस्कृतिलाई नै स्थापित गरे । नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादको सपना बाँडे तर उनीहरू यथार्थमा दलाल संसदीय व्यवस्थाको असली ठेकेदार बने । अहिले यही व्यवस्थाले जनतालाई कङ्गाल बनाइरहेको छ । दलाल व्यवस्थाले जनसेवा र सामाजिक सेवा भन्दैन । जे गरेर पनि मुठीभरले नाफा कमाऊ भन्छ । सरकार नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर कमिसन र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने गर्छ । सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको स्वार्थमा अथाह दोहन गरिन्छ । उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र होइन, उपभोग र परनिर्भर अर्थतन्त्र लागू गरेर देश खोक्रो बनाउँछ । जनताको राष्ट्रवादी भावना र मनोविज्ञानमा कस्मेटिक राष्ट्रवादी जालोले भ्रम उत्पन्न गरिन्छ । ठूलाठूला राष्ट्रघातलाई मौसमी राष्ट्रवादले छोपेर पुनः जनमत पाउने वातावरण बनाइन्छ । नेपालको आजको यथार्थ यसरी नै अघि बढिरहेको छ ।
मानिस बेपत्ता बनाउने कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र अपराधभित्र पर्छ । यो मुद्दालाई कानुनी हिसाबले पनि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठान गरी न्यायको सबै ढोका ढकढक्याउन सकिन्छ ।
(लेखक राज्यद्वारा बेपत्ता योद्घा परिवार समाजकी पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सल्लाहकार हुन् ।)
एमसीसी लागू हुन नदिने घोषणासहित नेकपा रूपन्देहीले जलायो सम्झौतापत्र